I-MX-Linux 19 - I-Beta 1: I-Distrowatch Distro # 1 ibuyekeziwe | Kusuka kuLinux
Namuhla, sizokhuluma ngakho «MX-Linux», kuhle «Distro GNU/Linux» hhayi lokhu kuphela kwe okokuqala ezingeni lewebhusayithi ye-Distrowatch ngokuba ukukhanya, okuhle nokusha, kepha kungani anikeze okuningi angakhuluma ngakho okwakhe indlela engeyona yokonga, kanye nesitayela sakhe esithile kanye nokupakisha okuhle kakhulu.
Kanjani kwabanye izindatshana ezedlule ngaphakathi kwe-Blog, sesike sakhuluma ngokujulile mayelana yini «MX-Linux» y okusivumela ukuthi sikwenze «MX-Linux», namuhla sizokhuluma ngqo ngezindaba ezifakwe kule beta yokuqala yekusasa «versión 19»ucingo «Patito Feo», kanye nendlela yayo yokufaka.
Kodwa-ke, kufanelekile ukugqamisa kusuka ku- «MX-Linux», lokho phakathi kwakhe ukupakisha kwakho kanye nezici zokuzalwa unikeze ithuba lokuthi Abasebenzisi okufanayo, bangakwazi dala izinguqulo zakho ezenziwe ngezifiso futhi ezilungiselelwe ngefomethi ye-ISO ngangokunokwenzeka, enezici ezintsha namakhono, ukuze ube nohlobo lwe «Distro personalizada» ukuthi bangahlanganyela nemiphakathi noma namaqembu.
1 Yini okusha in MX-Linux 19 - Beta 1 (MX-19b1)
1.1 Iphasela elibuyekeziwe
1.2 Izinhlelo zifakiwe
1.4 Ukufakwa kwe-MX-Linux
1.4.1 I-Paso 1
1.4.2 I-Paso 2
1.4.3 I-Paso 3
1.4.4 I-Paso 4
1.4.5 I-Paso 5
1.4.6 I-Paso 6
Yini okusha in MX-Linux 19 - Beta 1 (MX-19b1)
Ngokuya ngebhulogi lakhe elisemthethweni «MX-Linux 19» in yakhe «versión Beta 1» inokulandelayo izindaba:
Iphakheji entsha yesisekelo kusuka kunguqulo esanda kukhishwa ye- UDEBERI 10 (Buster), kanye nephakheji yesisekelo ebuyekeziwe futhi eguquliwe ye- Izinqolobane zemiphakathi ye-antiX neMX.
Amaphakethe we I-firmware ebuyekeziwe ezinguqulweni zakamuva ezitholakalayo.
I-XFCE - 4.14
I-GIMP - 2.10.12
I-Kernel - 4.19.5
I-VLC - 3.0.8
LibreOffice - 6.1.5 (Izibuyekezo eziningi zokuphepha)
Phakathi kwabanye abaningi, sekuvele kufakiwe futhi kuyatholakala ezinqolobaneni zabo ezishumekiwe.
Kuyinto «versión Beta 1» de «MX-Linux» itholakala kusuka ku- I-25 ka-Agasti ka-2019, iyatholakala ukuze ilandwe ngqo esizeni se- SourceForge, kusuka kusixhumanisi esilandelayo:
Kuyaphawuleka ukuthi abadali bayo, Bakhiphe le beta ngezinhloso zokuhlola kuphela futhi kungabi yimodeli eqondile noma yokugcina yokusetshenziswa okunwetshiwe.
Ngemuva kokulanda ifayela le- «Imagen ISO», ikopishelwe kufayela le- «CD/DVD/USB» Ukuhlolwa entweni yokusebenza ngokomzimba noma kwifomu yedijithali ukuze kuhlolwe ku-a «Máquina Virtual (MV)» futhi iqale (ibhuthwe) kunoma yiliphi lamacala ama-2 aveziwe, iqala ngesikrini esilandelayo:
Kulokhu isikrini semukelekileUma kunesidingo, nangokukhetha komsebenzisi, izinketho zebhuthi kufanele zilungiselelwe kusetshenziswa okhiye bokusebenza «"F2", F3", F4", "F5", "F6" y "F7"». Okungokokulungiselelwa okulandelayo:
Ulimi lwe-F2: para setha ulimi lapho kuzoboniswa khona i-Boot System ne-distro. Lokhu kuzoba okufanayo okuzodluliselwa ngokuzenzakalela ku-hard drive lapho kufakwa ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela.
Indawo Yesikhathi ye-F3: para setha indawo yesikhathi lokho kuzobusa i-distro ngefomethi ebukhoma (bukhoma). Lokhu kuzoba okufanayo okuzodluliselwa ngokuzenzakalela ku-hard drive lapho kufakwa ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela.
Izinketho ze-F4: para lungiselela amapharamitha wesikhathi nosuku ezosetshenziswa lapho kuqala uhlelo olubukhoma. Lokhu kuzoba okufanayo okuzodluliselwa ngokuzenzakalela ku-hard drive lapho kufakwa ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela.
Ukuphikelela: para nika amandla isici sokuphikelela uma kwenzeka usebenzisa isithombe kudrayivu ye-USB, okungukuthi, ukugcina izinguquko ezenziwe ku-Live USB uma icishiwe (ivaliwe).
Imodi ephephile ye-F6: para yenza nokwenza kahle kokuqhafaza yomthwalo we-distro, ikakhulukazi ezingeni lezinqumo zevidiyo ukunciphisa ukwehluleka kwe-boot.
I-F7 Console (ukuphela): para lula ukuguqulwa kwesinqumo kuzinduduzo ezibonakalayo. Isebenziseka ukuqala ukufakwa kolayini womyalo noma ukulungisa iphutha ekuqaleni kwenqubo. Yisebenzise ngokunakekela, njengoba lezi zimingcele zingadala izingxabano nezilungiselelo zemodi ye-kernel. Le nketho iqhubeka lapho iDistro ifakiwe.
Uma sekumisiwe, okusele ukucindezela ukhiye «Enter» mayelana nenketho yokuqala ebizwa «MX-19beta-1 x64 (August 25, 2019)» bese ulandela izinyathelo ezingezansi ukuqala i-Distro ebukhoma, ukufaka, ukuqala kabusha nokuhlola.
I-MX-Linux boot yokuqala
Ukubuyekezwa Kwesicelo se-MX-Linux
Njengoba kungabonakala, «MX-Linux» Ku-beta yayo yokuqala, yilokho ekuthembisayo. I-Distro elula, elula, enhle futhi esebenzayo. Ngaphezu kwalokho, njengoba sekushiwo ngaphambili, ukufakwa kwayo okungavamile kufaka phakathi izinhlelo ezifana ne- «MX Snapshot», okuwuhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ukhiqize ifayela le- «Imagen ISO» egcizelele futhi elungiselelwe zamanje «Sistema Operativo», njengoba kunjalo nanamuhla. Ifana kakhulu ne- «Remastersys y Systemback».
Futhi ekugcineni, kufaka phakathi nezicelo ezi-2 ezibiziwe «MX Live USB Maker (Creador de USB Vivo MX)» y «dd Live USB» ukulungele ukusebenzisa ukurekhoda ifayela le- «Imagen ISO» kwe-distro entsha eyenziwe ngezifiso futhi elungiselelwe yamanje «Sistema Operativo» ngaphezu kweyodwa «Unidad USB».
Noma kunjalo, yi-Distro okufanele uyihlole.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-MX-Linux 19 - I-Beta 1: I-Distrowatch Distro # 1 ibuyekeziwe
Yebo, kufanele kuthiwe phakathi kwezici zayo eziyinhloko ukuthi isebenzisa iSysVinit njengohlelo lokuqalisa oluzenzakalelayo yize ifakiwe isistimu kepha ayenziwanga yasebenza. Sebenzisa i-systemd-shim ukulingisa imisebenzi yohlelo edingwa ezinye izinhlelo. Mhlawumbe yingakho kuqala ezingeni futhi unabalandeli abaningi ngokwengeziwe.
Yebo, kufanele kube ngenxa yalokho ngoba ngeke kube ngenxa yobuhle ngoba mubi kunokushaya ubaba
Uhlobo olusha lweProxmox Mail Gateway 6.0 selukhishiwe